बालिकाका लागि एकसेएक नामहरू, कस्तो नामको के अर्थ हुन्छ ? « News24 : Premium News Channel
“आमा, मेरो नामको अर्थ मैले भन्न नसकेकाले जागिरको अन्तर्वाता गुमाएँ नि ! कुन बाजेले राखेको यस्तो नाम ? कस्तो रिसउठ्दो !” छोरीका कुराको जवाफ मिलाउन खोज्दै गरेको बोली यस पंक्तिकारका कानसम्म ठोक्किन आइपुगेको थियो !
“त्यसो होइन, बाजेले त राम्रै नाम राखेका थिए । अश्विनी नक्षत्रमा जन्मेको भएर चुन्देवी । तर तेरा बुवा र मैले भएर चिस्ती राखेको हो । अलिक अर्कै बोलाउन मन लागेर सोच्यौँ र यही जुरायौँ । नामको मतलब जे भए पनि सुन्दा त बेग्लै रमाइलो लागेको छ है हामीलाई त !”
चिस्तीको केटा साथीले रोजगारी पाएर पनि छोड्नुपर्यो । भिडियो गेमको सौखिन उसले घरमा अभिभावकको कुरा नटेरी आफूखुशी गरेको थियो । उसले कक्षा आठको पञ्जीकरणमा आफ्नो नाम फेरेर मोहनबाट ‘मन्स्टर’ बनाएको थियो । कार्यक्षेत्रमा रहेका एक विदेशी हाकिमले मजाक गरी ‘जस्तो नाम उस्तै काम’ नहोस् भनेछन् । नाममा के राखेको छ र काम हेर्नु नि भनेर प्रतिवाद गर्न खोज्दा निक्लनु परेछ !
कहिले फौज्दारी कानुन पढाउने शिक्षकलाई क्रिमिनल सर र मनोविज्ञान पढाउने शिक्षिकालाई साइको मिस भनेका चर्चा समेत सुनिने गरेका छन् ।
यी प्रतिनिधि घटनाको आवरण छोएर भन्नुपर्दा नामको महत्त्व अहम् रहन्छ । तर्कको गोरेटोमा जो जता कुदे पनि नाम नामै हो, र यो अर्थपूर्ण र औसतप्रिय हुनु राम्रो मानिन्छ । ब्राण्डका पछि लागेर ब्यापार चल्ने दुनियाँमा यसको महत्व अझ प्रष्टिन्छ । यसै प्रसङ्गमा वस्तु र स्थानलाई छोडेर मान्छेसँगको कुरा यहाँ जोड्ने जमर्को गरिएको छ ।
कस्ताे नाम राख्ने ?
कसैलाई चिनाउने संज्ञा वा नामिक शब्दपुञ्ज नाम हो । कुनै पनि व्यक्तिको प्राथमिक परिचायक नाम विभिन्न किसिमले राख्ने र बोलाउने गरिन्छ । जन्मदाको समय र स्थानमान हेरेर राशी तथा नक्षत्रको कुण्डली मिलाउने, जन्मेको बारका आधारमा तय गरिने, जन्मँदाको अवस्था अनि स्थानअनुसार राखिने तथा परिवार वा कूल परम्पराअनुसार मिलाइने आदि विभिन्न तरिकाले मान्छेको नाम राखिन्छ ।
नामाकरण संस्कार आ-आफ्नो धर्मसंस्कृतिअनुसार फरक छ नै । यद्यपि देखासिकी र लहडबाजीमा पनि नाम राख्ने धेरै छन् । अनि नामका प्रकार नि उसो त मनग्गे छन् । वास्तविक नाम, बोलाउने नाम, उपनाम, पारिवारिक तथा घरेलु नाम, जात-थर-गोत्रअनुसारको नाम, छद्मनाम यानि आका वा उर्फ नाम, साहित्यिक नाम, सम्बन्धबोधक नाम, मजाक नाम, धार्मिक नाम, कामचलाउ वा अस्थायी नाम, राजनीतिक नाम, पेशागत नाम, कुण्डली नाम, दर्ता नाम, विद्युतीय नाम, आदि ।
सबै भक्तिसार आस्तिक नहुन सक्छन्, कुबेर नामका सबै पैसावाल छैनन् पनि । त्यसैगरी, कौशिला नाम हुने सबैमा कार्यकौशल नरहने यथार्थ आफ्नो ठाउँमा छ । चार्ली मान कर्मा चामाक अनि लालीमाया जिरेल लामाजी लेखिने चलन उत्तिकै भेटिन्छ । दुर्गाकुमारी दुर्गा कहलिन सक्ने र चन्डिका कुमारी देवी बोलाइन सक्ने प्रचलन आफ्नै किसिमको मान्न सकिन्छ । तर पनि, केदार राजातिलकजस्ता नामको छोटकरी लेख्न बोल्न नमिल्ने पनि हुन सक्छ । यस-उसले हेर्दा नामै सबै कुरा होइन तर पनि यसको आफ्नै आधारभूत कडी छ । सावधानी जरुरी संकेत गरिएको बुझियोस् कि निर्धक्कसँग आफ्नो नाम भन्न तथा उल्लेख गर्न सबैले पाउनु पर्छ । नामकै कारण कोही कतै बदनाम हुने स्थिति आउनु ठीक मानिदैन !
बुझ्नै पर्ने कुराका हकमा, केही नाम मिल्दोजुल्दो पाराले विभिन्न भाषासंस्कारमा पाइने गरेका पनि छन् । जस्तो, रिता अंग्रेजी अनि नेपाली दुवैतिर चलेको पाईन्छ । हरि पनि ह्यारी हो कि जस्तो लाग्छ नै । यसैगरी, अलिना नामले हाम्रातिर तडकभडक कम मनपराउने स्त्री अनि स्थानीय सुन्दरी भन्ने बुझाउँछ भने ग्रीसेली भाषामा ज्योतियुक्त उज्याली र उर्दुमा सुन्दरपना हुने अर्थ राखेको पाइन्छ । मिल्दोजुल्दो नामथर पार्ने चलन पनि पाइएकै छ । राई (एलिसा राई / नेपाल) र राय (ऐश्वर्या राय / इन्डिया) अंग्रेजी हिज्जेमा उस्तै भेटिनु उदाहरणीय छ नै । कतिपय यस्ता कुरा रमाइला भैकन खोजी र बहसका विषय पनि बन्नेगरेका छन् भन्ने ठहर जानकारी गराइन्छ ।
यसरी नाम धेरै प्रकारका हुने र आफ्ना भैरहेका सार्थक नामहरू कुनै सेलेब्रिटी मनपरेको भन्दै उस्तै पार्न खोज्दा र लहडबाजीमा जे पायो त्यही पनि गर्नपुगेका घटना पाइन्छन् । अझ अरूको पुच्छर आफ्नो सिउरभन्दा राम्रो मान्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको नबुझ्नेतिर नगइ आफ्नै राम्रा कुराको अनुसरणमा लागिपर्न सुझावसहित बालिकाका केही सम्भावित नामहरू अर्थसहित यहाँ राखिएको छ ।
केही नाम र अर्थ-
अक्शाना अर्थात् राम्रा आँखा भएकी
अगिरा अर्थात् सौर्य पराक्रमयुक्त
अचिरा अर्थात् ठण्डा स्वभावको, सम्यमी
अदिती अर्थात् विश्वव्यापी
अद्विना अर्थात् अदाकारी बुझाउने, कलाकार
अनिता अर्थात् नेतृत्वशाली
अनिला अर्थात् वगैँचामा चल्ने मन्द मृदु हावाद्योतक
अन्तिमा अर्थात् अन्त्य क्रमको, कान्छी
अन्बिनी अर्थात् मिठो व्यक्तित्वको
अभिप्सा अर्थात् उत्कट इच्छाशक्ति हुने
अभीका अर्थात् प्यारो छविको, स्नेहालु
अमन अर्थात् शान्त स्वभावको, झैझगडा नचाहने
अमरन अर्थात् बडप्पन राख्न बुझ्न सक्ने स्वभाव हुने
अमिता अर्थात् अनन्तवाची
अमिषा अर्थात् निश्छल प्यार गर्ने सुन्दरी
अम्बुजा अर्थात् देवीतुल्य
अरीफा अर्थात् विशेष सिपले सज्जित स्त्री
अरुन्धति अर्थात् निष्ठावान् सुन्दरी
अलरी अर्थात् फूलजस्तै व्यक्तित्वकी कन्या
अलिशा अर्थात् देवरक्षित यानि भगवानको कृपाप्राप्त नारी
अहाना अर्थात् दिनको उज्यालो संकेत गर्ने अर्थको
अहिल्या अर्थात् सदैव कन्याभाव कायम राख्नसक्ने अति सुन्दर स्त्री
आतिका अर्थात् स्नेहा यानी प्यारी तथा लाडली
आद्रिका अर्थात् डेगले रहने स्त्री यानि अटल विश्वासकी पात्रा
आभा अर्थात् ज्योति तथा खुशीलो मुहार हुने, झर्झराउँदो व्यक्तित्व
आरुषि अर्थात् आरशी, सूर्यको पहिलो किरणको जस्तो तेज हुने सुन्दरी
आरोही अर्थात् साङ्गीतिक मिठास बुझाउने, प्रगतिप्रेरक
आर्यिका अर्थात् ज्ञानचेतले चिनिने प्रसिद्ध नारी
आशना अर्थात् मायालु वा दिलदार कन्या
आशिका अर्थात् वरद व्यक्तित्व, आशिसयुत
आसमा अर्थात् मूल्यवान तथा अर्थपूर्ण बुझाउने
इक्शिथा अर्थात् इक्सिता यानि हेरौँ-हेरौँ लागिरहने सुन्दरी
इना अर्थात् तेजश्विनी यानि सौर्य शक्तिमानी वा पराक्रमी
इप्सिता अर्थात् इच्छा बुझाउने अर्थको नाम
इभा अर्थात् गजिका यानि हात्तीसमान व्यक्तित्व हुने
इरिषा अर्थात् पुख्खली यानि वाक्पटुता भएकी स्त्री
इलाक्षी अर्थात् सुझबुझपूर्ण दृष्टि राख्ने सुन्दरी, हरिणनयनी
इलिना अर्थात् चोखो माया गर्ने नारी
इशिका अर्थात् वचन वाण चाल्न सकिने, तिक्ष्ण स्वभाव रहने
इश्मीता अर्थात् भगवानसँग मित्रवत् सम्बन्ध हुने
इस्मिता अर्थात् इलील यानि सुन्दर व्यक्तित्व हुने
उजेशा अर्थात् कान्तिमयी, प्रकाश दिने तत्त्वबोधक
उत्पला अर्थात् कमलको फूलजस्तै यानि सुरुवातदेखि सुन्दर
उदिता अर्थात् उदीयमान, नामजनित
उद्यति अर्थात् कृयाशील, केही न केही गरिरहन चाहने
उमिका अर्थात् ईशा, इभा यानि देवीतुल्य
उर्शिता अर्थात् इच्छाशक्ति र दृढता हुने
अङ्सी अर्थात् ॠषिमन गर्ने व्यक्तित्व
कुञ्जला अर्थात् कोइलीकोझैँ मिठास स्वर बुझाउने नाम
चोफुङ अर्थात् चमेलीफूलझैँ सुन्दर
छिरिङ अर्थात् जोशपूर्ण दीर्घ जीवनबोध गराउने नाम
ज्योत्स्ना अर्थात् फूलजस्तै सुन्दर
दिशिता अर्थात् कुनै विशेष कुरामा ध्यान दिने, प्रष्ट दृष्टिकोण हुने
नकीमा अर्थात् फूलझैँ सुन्दर
नादिरा अर्थात् दुर्लभ प्यार बुझाउने सुन्दरी, प्यारो नाम
नितिमा अर्थात् नैतीक व्यक्तित्व, आफ्नो सिद्धान्तमा चल्ने सुन्दरी
निशिता अर्थात् निशा, नक्तिमा, रजनी, रातीको सौन्दर्य अवस्था झल्काउने स्वभावको
नुमा अर्थात् सुन्दर आ एबम् छविको
फतिना अर्थात् फातिना यानि सर्वगुण सम्पन्न स्त्री
फिजा अर्थात् समुन्द्रको पानीको फिँजजस्तै सुन्दर
भिन्तुना अर्थात् शुभकामना बुझाउने अर्थको नामिक शब्द
मिनाक्षी अर्थात् सुनयना यानि माछाकाझैँ राम्रा आँखा भएकी स्त्री, मत्स्यनयनी
मेहर अर्थात् कल्याणी, हितैषी
मैखु अर्थात् अपनत्वबोधक सुन्दरताको नाम
म्हेन्दु अर्थात् फूलजस्तै सुन्दर तथा प्रिय
युवाना अर्थात् शक्तिशली, ज्यानदार
रिचा अर्थात् वेदको श्लोकझैँ पवित्र भाव राख्ने औरत
रोहसार अर्थात् प्रेमफूलको प्रतिमासमान व्यक्ति
ललिता अर्थात् चञ्चल तथा मनमोहिनी, लालित्यपूर्ण औरत
लाजिम अर्थात् अति आवस्यकता महशुस गराउने
वत्शला अर्थात् प्रेम र सदाचारयुक्त
सबनम अर्थात् शीतपरी
साश्वता अर्थात् निहित सत्यता बुझाउने
सुमन अर्थात् कोमल, कुमुद, कुसुमसरी सुन्दर
सौम्या अर्थात् सोमत भएकी, तन मन व्यवहारले पृय
स्मिता अर्थात् गालामा खोपिल्टो वा डिम्पल हुने स्त्री
ह्रितिका अर्थात् मनमा पाप नराख्ने, सह्रिदयी तथा सत्यवादी
(सुमन, कुसुम, छिरिङ्गजस्ता केही नाम पुलिङ्गी पनि हुनसक्ने हुँदा सोहीअनुसार लिइने विश्वाससहित)